Cadow Looma Cararo, Cudurna Looma Ciido • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Cadow Looma Cararo, Cudurna Looma Ciido
 Sanadkii 1831 M ama 1246 Hijri waxaa Daacuun ka dilaacay Makkah waxa uu ku galaaftay waqtigii Xajka gudihiisa afar meeloodoo saddex (¾) Xujaajtii sanadkaa.
 21 sanadood oo is xigay waxaa ay taariikhdu warinaysaa in sanadihii 1837-1858 M ama 1253-1274H ay ka dilaaceen Daacuunno is xigxigay oo aan dhamaanayn Bilaadkaa barakaysan ee Xaramaynka, waqtigaa waxaa diiwan gashan in ilaa 7 sanadood oo ka mid ahaa aanan cid xujey ihiba soo niyayasan Xajka baqdin laga baqayo in cuduradaa degay dhulkii barakaysnaa. Waxaana laga sheekeeyaa in Xajkii Sanadkii 1846M ama 1262H uu daacuun hadheeyay Xajkii waxaana maalin kaliya ku dilay 15000 oo Xaaji
 Sidoo kale Sanadkii 1858M ama 1274H ayaa daacuun nooca Cholera ahi aduunka ka dilaacay weliba xagga Masar ayuu aad ugu batay, dabadeed Culimadii waxa ay u diideen in ay sanadkaa reer Masar soo galaan Xaramaynka si aanay u aafayn muslimiinta kale. Wixii intaa ka dambeyeyna waxaa la sameeyay goobo dadka lagu hayo (Quarantine), Xeryahaasi waxa ay ku yaaleen inta badan xeebaba bada cas sida Caqaba iyo Sinai iyadoo Xujaajta lagu hakinayay sii socod iyo soo noqoshadoodaba (Go/Back) Sidaasay ahyd Intii u dhaxaysay 1830 ilaa 1930 waxaana maamulayay Boqortooyadii Cusmaniyiinta. Isla waqtigaa waxaa diiwaan gashan in bilaadka xaramaynka uu ka dilaacay Cholera 27 jeer in ka badan.
 Sidoo kale dhawr jeer baa Reer Ciraaq laga hor joogsaday Xajka cuduro ka dilaacay awgood, xataa Yemen sidasaa lagu sameeyay, in kasta oo ay Daacuunadu Xajka ka dhaca loo sababayn jiray Xujaajta ka imanaysay Masar iyo India
 Kaba darane sanadkiii 1858M ama 1274H waxaa dhacay qax balaadhan oo badanka reer Xijaas (oo ah degaanka xeebaha bada cas iyo labada Xaramayn) ay xanuunadaa soo noqnoqonayay awgood uga qaxeen dhulkoodii una qaxeen dhankaa iyo Masar
 Isla Xajkii sanadkii 1892M ama 1309H Cholera xun ayaa ka dilaacay Xajjka kaasoo xujaajtii aad u laayay waxaana laga sheekeeyaa in Maydadkii Xujaajta la kala guri kari waayay xataa la waayay meel la dhigo iyo lagu Aaso, fara badni awgeed, dabadeed waxaa ay is dul baxeen laga bilaabo degaanka Carafo, Deegaanka Musdalifa, ilaa deegaanka Mina ilaa lagu soo dhawaanayo gudaha Makkah
 Taariikhahan dhawna Xajkii sanadkii 1987M ama 1407H waxaa ka dilaacay Qoorgooye ama Meningitis kaa soo galaaftay in ka badan toban kun (10,000) oo Xaaji
 Waxase aynu maqalnaa xukuumada Sucuudiga oo sandaha ka joojinaysa wadamada qaar, sida daacunada Bangaladhesh, Ebolihii Afrikada Galbeed imw. Waxaana ay muujinaysaa inay mas’uuliyad dareemayaan oo ah inay ilaliyaan Xujaajta kale ee fayow ee dalalka kale badan.
 Feb. 2020 isla sanadkan waxaa ka dhacay Xaruntii waxbarashada ee Shiicada Qom, oo ay degan yihiin culimada ugu caansan Shiicadu, sidoo kale ah goob ay ku soo hirtaan ardayda aduunka ee doonaysa inay bartaan cilmiga madhabta shiicada. Waxaana joogay in ka badan 40,000 oo arday. 21 February 2020 ayaa saddexdii qof ee ugu horaysay ku dhinteen Qom. Wax yar ka diba 13 March, waxaa cudurkii noqday mid aafeeya dalkii oo dhan waxaana laga helay 11,364 qof Waxaan u dhintay waqtigaa 514 Ruux, dadka aadka u dhintay waxaa u badnaa culimaddii iyo wax garadkii shiicada, dabadeed waxaa loo aqonsaday Qom oo Iran ah epicenter ka Bariga dhexe. Maanta Iiran wuxuu ku dhacay 124,603 qof waxaana uu dilay 7200 qof.
4. Maxaan ka yeelnaa Hotelada, Restourants-ka?